HomeWararka MaantaOxlade-Chamberlain Oo laga Yaabo inuu seego koobka aduunka,Yaase laga bedeli doonaa?
Alex Oxlade-Chamberlain rajadiisa koobka aduunka ayaa shaki uu ku yimid ka dib markii xiddiga Arsenal dhaawac ka soo gaadhay Jilibka middig intii lagu guda jiray kulankii saaxiibtinimo ee 2-2 la galeen Ecuador .
Khadka dhexe ee England ayaa la bedeley daqiiqadii 63-aad xili sidoo kalena garoonka laga saarey oo guduud loo taagey Da’yarka Liverpool Raheem Sterling.
Wiilka Arsenal ayaa garoonka laga qaadey markii ay isku dheceen ciyaaryahan Carlos Gruezo oo Ecuador katirsan,iyadoo Oxlade-Chamberlain xili ciyaareedkii dhamaadey xitaa uu kulamo badan ka maqnaa kooxdiisa dhaawac darteed.
Wararku waxay sheegayaan in maanta Chamberlin la saari doono Raajo dhaqaatiirtuna laga dhowri doono inuu ka qeybgeli karo koobka aduunka iyo inuu khaliin u baahnan doono,hadii ay taasi dhacdana waxaa booskiisa u taagan dhaxal sugayaasha kala ah Michael Carrick iyo Tom Cleverley midkood oo labaduba matirsan Manchester United.
Dagaalka Messi & Yuhuudu Xaggee Salka Ku Hayaa…….
Ronaldo, Messi Iyo Neuer Maxay Ka Yidhaahdeen In Ay Isku Koox Noqdaan